कांग्रेस नेताले पनि ‘डमरुको डण्डीबियो’ हेरे
Home मनोरञ्जन कांग्रेस नेताले पनि ‘डमरुको डण्डीबियो’ हेरे
शुुक्रवारबाट देशव्यापी प्रदर्शनमा आएको पूर्व राष्ट्रिय खेल डण्डीबियोको कथामा निर्मित फिल्म ‘डमरुको डण्डीबियो’ हेर्न कांग्रेसका दुई नेता हल पुगेका छन् । आइतवार साँझ ठमेलमा रहेको छायाँ सेन्टर पुगेर कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइराला र केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व सञ्चारमन्त्री डा. मिनेन्द्र रिजालले फिल्म हरेका छन् ।
फिल्म हेरेर निस्कँदै गर्दा नेता कोइरालाले आफू पुनः डण्डीबियोलाई राष्ट्रिय खेल बनाउन पहल गर्ने आश्वासन दिए । उनी भन्छन्, ‘बाल्यकालमा विराटनगरमा खेलिएको सम्झना ताजा गरायो । यस फिल्मले गर्दा डण्डीबियोको महत्व पक्कै बढेको छ ।’
यस्तै, डा. रिजालले पनि फिल्मले राम्रो विषय उठान गरेको बताए । ‘डण्डीबियोको विषय भएपनि फिल्म निकै रमाइलो बनेको छ । यस किसिमको विषयवस्तुलाई रोज्ने निर्माण टिमलार्इ धन्यवाद दिन चाहन्छु’, रिजालले भने ।
घले गाउँ र काठमाडौंमा खिचिएको यस फिल्मले शहरमा बसेर पढेको एक युवक डण्डीबियोलाई पूर्नस्थापित गर्न गाउँ पसेको कथा बोल्छ । यो फिल्ममा खगेन्द्र लामिछाने, मेनुका प्रधान, अनुप बराल, आशान्त शर्मा, अंकित खड्का, लक्ष्मी बर्देवा, बुद्धि तामाङ, इंगी होपो सुनुवारलगायतका कलाकारको लिड रोल छ ।
खगेन्द्रले ‘डमरुको डण्डीबियो’ मा एक डण्डीबियो खेलाडीको भूमिका निर्वाहा गरेका छन् । उनकै को लेखन रहेको यस फिल्मका निर्देशक छेतेन गुरुङ हुन् । यसअघि उनले ‘नोभेम्बर रेन’, ‘क्लासिक’, ‘डायरी’ जस्ता फिल्मको कथा र संवाद लेखिसकेका छन् ।
समृद्धि इन्टरटेन्मेन्टको ब्यानरमा विनोद गुरुङ र नोर्बु छिरिङ घलेले ‘डमरुको डण्डीबियो’ निर्माण गरेका हुन् ।
धर्मका नाममा अतिवाद
आज पारमाणविक सम्झौताबारे अमेरिकी निर्णय हुने
सेल्फी किङ युट्युबमा रिलिज
सुशान्तलाई न्याय दिन वरुण धवन र मौनी रायले उठाए आवाज
सुशान्तमाथि केन्द्रित रहेर फिल्म बन्दै
लकडाउन हटेपछि सुटिङमा पल शाह
विश्वकै वृद्ध युट्युबर
कोरोना सन्त्रास : २ नम्बरी’ को छायांकन रोकियो ‘